2002 – Year – Alpha Premium
National Lampoon’s Van Wilder ##unicode ကျောင်းကို အရမ်းချစ်လို့ ကောလိပ်မှာ ၇နှစ်တိုင်တိုင် တက်နေတဲ့ ဗန် ဝိုင်းလ်ဒါ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်... ဆောင်းပါးရေးရတာ သဘောကျပြီး အနာဂတ်မှာလည်း စာနယ်ဇင်းသမားဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဂွမ် ပီယာဆင် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်... သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့ဆုံကြပုံလေးတော့ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ဗန်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူတိုင်းကို ကူညီချင်စိတ်ရှိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူက ပညာရေးထက် အခြားအရာတွေမှာသာ အချိန်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတာကြောင့် ကျောင်းတက်နှစ် ၇နှစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့အဖေကလည်း စိတ်တိုပြီး သူ့ရဲ့ကျူရှင်စရိတ်ကို ဆက်မထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ဗန်အတွက် အနည်းငယ် အကျပ်ရိုက်သွားသလို ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူဟာ ပါတီပွဲတွေကို စည်ကားအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီကရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းကပဲ ဗန် နဲ့ ဂွမ်တို့ကို တွေ့ဆုံစေခဲ့တာပါ။ ဂွမ်ရဲ့ အယ်ဒီတာက ဗန့်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဆောင်းပါးရေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ပထမအစမှာ နှစ်ယောက်သား ပဋိပက္ခရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ ...
IMDB: 6.4/10 102,401 votes
IMDB: 6.0/10 4,484 votes
25th Hour 25th Hour(2002) IMDb…7.6,,,Rotten…78% New Yorkမြို့ပေါ်က မူးယစ်ဆေးရောင်းချသူ မွန်တီဘရိုဂန်လို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူဟာ အချိန်အတော်ကြာဒီလောကထဲကျင်လည်ခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံတွေတော်တော်များများစုမိဆောင်းလာလို့ပဲလား ချစ်သူတစ်ယောက်ရခဲ့လိုပဲလားမသိ… မူးယစ်ဆေးရောင်းချသူအဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်ပြီး အေးဆေးပဲနေတော့တယ်… အေးဆေးနေတဲ့အချိန်ရောက်မှ တစ်နေ့တော့ရဲတွေ သူ့အိမ်ကိုရောက်ချလာတယ်.. ဖမ်းဝရမ်းလည်းပါသလို ပိုက်ဆံတွေမူးယစ်ဆေးတွေကို အလွယ်တစ်ကူရှာတွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်… ကြည့်ရတာ တစ်ယောက်ယောက်ချောက်ချလိုက်ပုံပါပဲ… ထောင်(၇)နှစ်ကျဖို့ အမိန့်ချပြီး မွန်တီအတွက် တစ်ရက်အချိန်ရခဲ့တယ့်.. နောက်နေ့မတိုင်မီဆိုတော့ပြောရရင် ၂၅နာရီပေါ့…ဒီအချိန်အတွင်း သူဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့… ဒီကားထဲက မင်းသားကြီး Edward Norton ကို အတော်များများသိကြမှာပါ…ဗီလိန်ခန်းဆို ကြည့်နေတဲ့ TVပြေးရိုက်ခွဲချင်လောက်အောင် ပီပြင်လှသလို၊ သနားစရာဇာတ်ရုပ်ဆိုလည်း အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်လို တော်လွန်းလှတာသိကြမှာပါ…ဆုကြီး(၄)ဆုရရှိထားတဲ့ကားမို့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…..
IMDB: 7.6/10 168,211 votes
The Ring (2002) The Ring အဝန္းအဝုိင္းလုိ႔လည္း အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဖုန္းျမည္သံလုိ႔လည္း အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားနဲ႔ ဆက္စပ္ၾကည့္ရင္ ဒီအဓိပၸါယ္ႏွစ္ခုလုံးကုိေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီေသမင္းတမာန္ ဗီဒီယုိတိပ္ေခြ ဇာတ္လမ္းကုိ ၾကည့္ဖူးသူေတြမ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အထူးတလည္မိတ္ဆက္ေပးစရာမလုိေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားေလးကုိ Ring ဆုိတဲ့ ဂ်ပန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုက ေက်ာရုိးယူျပီးရုိက္ထားေပမယ့္ တစ္ဝက္ေလာက္ အေၾကာင္းအရာမတူပါဘူး။ ဇာတ္ကားရဲ႕ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ မင္းသမီးနဲ႔မင္းသားတုိ႔က ဒီဇာတ္ကားကုိ ဟားစရာျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ထားခဲ့ၾကေပမယ့္ အရမ္းကုိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ သရဲမေလး ဆာမာရာေနရာက သရုပ္ေဆာင္တဲ့ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ Daveigh Chase ဆုိရင္ သူ႕ကုိယ္သူျပန္မၾကည့္ရဲတဲ့အထိေၾကာက္မိပါတယ္တဲ့။ ဒီဇာတ္ကားေလးကုိ ျပန္လည္ခံစားခ်င္သူေတြ အရင္ကအရမ္းလန္႔ခဲ့ဖူးတာေလးေတြကုိ ျပန္သတိရခ်င္သူေတြအတြက္ ျပန္တင္ဆက္လုိက္ရပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီကားေလးက Rating ျမင့္တဲ့ Horror, Mystery ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားျဖစ္တာေၾကာင့္တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။
IMDB: 7.1/10 315,280 votes
Oasis (2002) Oasis (2002) =========== IMDB = 7.9 out of 10 Rotten Tomatoes = 90 out of 100 Directed By Lee Chang Dong တောင်ကိုရီယား New Waveဒါရိုက်တာလီချန်းဒုံကို Burning, Poetry, Peppermint Candyတို့နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ လီချန်းဒုံရုပ်ရှင်တွေဟာ အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ကိုရီယားရုပ်ရှင်လို့ လုံးဝထင်စရာမရှိတ‌ဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့။ အဆိုးဘက်ရောက်တဲ့ လူသားဆန်မှုတွေကို သိသာသာမီးမောင်းထိုး ပြတတ်ပါတယ်။ လီချန်းဒုံအခုထိရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ခြောက်ကားပဲရှိပါတယ်။ Peppermint Candyနဲ့ Green Fishကလွဲလို့ ကျန်တဲ့လေးကားကို သူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာပါ။ Burningကတော့ မူရာကာမိကိုကျောရိုးယူပါတယ်။ လီချန်းဒုံရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေဟာ သာမန်လူတွေ သူတို့ရဲ့ သာမန်နေ့စဉ်ဘဝမှာ သာမန်လုပ်နေကြ အရာတွေကိုပဲ ရိုက်ပြထားတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သူ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလူဆိုးလူကောင်းမရ‌ှိဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကို ကျွန်တော်လက်ခံပေမယ့် ပထမအချက်ကိုတော့ လုံးဝငြင်းပါတယ်။ လီချန်းဒုံရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေဟာ သာမန်မဆန်ပါဘူး။ သူ့ရုပ်ရှင်တွေမှာ အဆိုးဘက်ရောက်တဲ့။လူသားဆန်မှုအတော်များပါတယ်။ သူမှားတာ‌တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေတိုင်းဟာ အမြဲတော့ သာယာတဲ့ကောင်းကင်တစ်ခုအောက်မှာ ရှိနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ...
IMDB: 7.9/10 7,612 votes
Spider-Man (2002) ဒီကားကေတာ့ Spider-Man ကုိသိတဲ့သူေတြေရာ မသိတဲ့ သူေတြကုိပါ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး Live Action Spider-Man ဇာတ္ကားက ပရိတ္သတ္ကုိ စိတ္ေႀကနပ္မွဳေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ့ Comic စာအုပ္ပရိတ္သတ္ေတြ အားေပးမွဳကုိရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီကားက သာမန္အထက္တန္းေက်ာင္းသား Peter Parker ဘ၀ကေန ဆယ္ေက်ာ္သက္ စူပါဟီးရုိး ျဖစ္လာပုံနဲ့ ရရွိထားတဲ့ စြမ္းအားေတြကုိ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အသုံး ခ်ဖို့ အတြက္ တြန္းအားရလာပုံေတြကို အဓိက ရုိက္ကူးထားပါတယ္။ Spider-Man ျဖစ္လာပုံကို အားလုံးသိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ Oscorp ကုမၸဏီက Radioactive Spider အကိုက္ခံရျပီးေနာက္ စြမ္းအားေတြရလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Spider-Man ရဲ့အေႀကာင္း အနည္းငယ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ Spider-Man ကုိ Marvel က ကာတြန္းဆရာ Stan Lee ကစတင္မိတ္ဆက္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သူ့ရဲ့ စိတ္ကူးကုိ ...
IMDB: 7.3/10 674,123 votes
xXx (2002) XXX ဆိုလို့ 18+ မထင်လိုက်ပါနဲ့ . 2002ခုနှစ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Vin Diesel ရဲ့အက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ 2002 မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး 2005မှာ နောက်ထပ် xXx 2005 ထပ်ထွက်ခဲ့ပြီး ထပ်မံနာမည်ကြီးခဲ့ရပြန်ပါတယ်၊ ခုလည်း 12နှစ်ကြာခဲ့ပြီး လာမယ့် 2017မှာ ဒီကားကထပ်မံထွက်ဦးမှာပါ ၊ အဲ့တော့ 2017 မှာ ထွက်ရင်ဇာတ်ရည် လည်လည်ကြည့်ရအောင် အရင်ကမကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ပရိသက်များ အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ဇာတ်လမ်းအညွှန်းအနေနဲ့ အပိုင်း(၁) ကိုအနည်းငယ်လောက် ပြောပြချင်ပါတယ် ********************************************************************** X လို့ စတန့်လောကမှာ နာမည်တွင်နေတဲ့ X(vin diesel)ဟာ အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ကားကိုခိုးယူပြီး တံတားပေါ်ကနေခုန်ချပြခဲ့တာကြောင့် ရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းယူခြင်းခံရပါတယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းရေး အဖွဲ့ဟာလည်း မှောင်ခိုးသမားတွေကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားတိုင်း သူတို့ရဲ့ အေးဂျင့်တွေသာ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့် အကြံအစီတစ်ခုအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေထဲကမှ ထူးချွန်သူများကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီး အခွင့်ရေးတစ်ချို့နဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်ကာ မှောင်ခိုသမားတွေကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးစေပါတယ်၊ ကဲ . . ...
IMDB: 5.9/10 171,456 votes
Punch-Drunk Love Punch-Drunk Love(2002) IMDb – 7.3 ဘယ်ရီတဲ့ သူဟာ ကြောင်တောင်တောင်လူလို့ပဲပြောရမလားမသိ… သူဟာ အချစ်ဆိုတာ မကြုံခဲ့ဖူးသူ …. သူ့မှာ အစ်မတွေ ၇ ယောက်တောင်ရှိတယ်… ဒီအစ်မတွေဟာ သူငယ်ငယ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရယ်စရာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ကိုအမြဲလှောင်ပြောင်နေလေ့ရှိတယ် … အဲ့ဒီအစ်မတွေကပဲ အချစ်မရှာတဲ့သူ့အတွက် ချစ်သူတစ်ယောက် ဝိုင်းရှာပေးကြတယ် .. အကွက်တွေဖန်ပေးကြတယ် …. ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်ရီတစ်ယောက်ဟာ အဆင်မပြေနေခဲ့လေတော့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေတာပေါ့ .. ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ သူ့ရဲ့အထီးကျန်မှုကို ခဏတာဖြေဖျောက်ဖို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်မိချိန်ကစလို့ ကိစ္စပေါင်းစုံကြုံရပါတော့….ဒီကားက မင်းသားကြီး Adam Sandler ကိုတော့ တော်တော်များများသိကြမှာပါ..ရုပ်ရည်ပြေပြစ်တဲ့မင်းသားမဟုတ်ပေမဲ့ Drama တွေ Romance တွေမှာဆို ပရိတ်သတ်နှလုံးအိမ်ကို လွန်စွာမှ ဖမ်းစားနိုင်တာသိကြမှာပါ…သူ့ကားတော်တော်များများ တကယ်ကောင်းလွန်းသလို ယခုကားလည်း ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပေမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
IMDB: 7.3/10 143,680 votes
Infernal Affairs 1+2+3 Infernal Affairs ဇာတ်ကားတွေကတော့ Directer Andrew Lau and Alan Mak တို့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Hong Kong crime thriller အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ကတော့ ရဲအရာရှိနှစ်ဦးနဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေ ရဲ့အကြောင်းကို အခြေခံရိုက်ထားတာပါ ။ တရုတ်မှာဆိုရင်တော့ “The Unceasing Path” လို့ လူသိများပြီး 76th Academy Awards မှာလည်း The Best Foreign Language Film and Best Picture awards in the Golden Horse Awards အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း အရာရှိချန် ကတော့ triad ဒုစရိုက် လူသတ်မှု့တွေကို တိတ်တဆိတ် ထောက်လှမ်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ သူဒီလိုတိတ်တဆိတ် စုံစမ်းနေတာကိုသိတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူကတော့ သူ့ရဲ့ အထက်ရဲအရာရှိမှူးဖြစ်တဲ့ အရာရှိဝေါင်ပါ ။ တစ်ဖက်မှာကတော့ ...
IMDB: 8.0/10 115,799 votes
Infernal Affairs 1+2+3
Queen of the Damned ##zawgyi ဟိုးအရင္တုန္းကMariusလို့ေခၚတဲ့ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္တစ္ေကာင္ဟာေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ Lestatကိုဖန္တီးခဲ့တယ္ၿပီးေတာ့ သူတို့ေလာကရဲ့ ပညာေတြ ကို အစြမ္းကုန္သင္ေပးခဲ့တယ္ အဲ့လိုနဲ႔ေနလာရင္းတစ္ရက္မွာ Lestatဟာ သူ႔ရဲ့ဂီတသံေၾကာင့္ပထမဆုံးေသြးစုတ္ဖုတ္ေကာင္Akashaကိုႏွိုးထေစခဲ့မိတယ္ သူဒီအေၾကာင္းေတြၿပီးတဲ့အခါမွာ သူဟာအိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ Lestatဟာေရာ့ခ္ဂီတတစ္ခုရဲ့တီး၀ိုင္းအသံေၾကာင့္ နိုးထလာခဲ့ၿပီး ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ ဆက္လက္ၾကည့္ရွု ေပးၾကပါအုန္း ##unicode ဟိုးအရင်တုန်းကMariusလို့ခေါ်တဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ဟာသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် Lestatကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ သူတို့လောကရဲ့ ပညာတွေ ကို အစွမ်းကုန်သင်ပေးခဲ့တယ် အဲ့လိုနဲ့နေလာရင်းတစ်ရက်မှာ Lestatဟာ သူ့ရဲ့ဂီတသံကြောင့်ပထမဆုံးသွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်Akashaကိုနှိုးထစေခဲ့မိတယ် သူဒီအကြောင်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာ သူဟာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ် ဆယ်စုနှစ်များစွာအိပ်ပျော်နေတဲ့ Lestatဟာရော့ခ်ဂီတတစ်ခုရဲ့တီးဝိုင်းအသံကြောင့် နိုးထလာခဲ့ပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှု ပေးကြပါအုန်း Review – Thu wai zin File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Duration…1h 41min Genre :Drama, Fantasy, Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Thu wai zin Encoded by Arrow
IMDB: 5.3/10 51,416 votes
We Were Soldiers IMDb Rating (7.2/10) ရရွိထားတဲ့ နာမည္ၾကီးစစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္-ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတုန္းက တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံျပီးရိုက္ကူးထားတာပါ။ စစ္တို႕၏ သေဘာ…စစ္သားတို႕၏သေဘာကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျပီး စစ္ကားၾကိဳက္သူပရိတ္သတ္ေတြ လံုးဝစိတ္ေက်နပ္ေစမယ့္ ဇာတ္ကားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
IMDB: 7.2/10 126,973 votes
IMDB: 6.5/10 2,536 votes
IMDB: 5.4/10 6,182 votes
IMDB: 8.1/10 13,869 votes